Colour painting and Color palette makers Gbasara Anyị – Picker Agba Site Image
Gbasara Anyị – Picker Agba Site Image
Bridgegalleryny.com bụ ebe nrụọrụ weebụ akwadoro maka gị ndị chọrọ iji ohere na-ahọrọ ihe na-acha site na onyinyo ahụ, onye na-ahọrọ RGB agba, onye na-ahọrọ agba agba, ihe na-acha odo odo, onye na-ahọrọ ụcha agba, onye na-ahọrọ ụdị ụcha HTML. ọtụtụ ndị ọzọ na-eji weebụsaịtị a.
Bridgegalleryny.com bara uru nke ukwuu maka gị ndị na-arụ ọrụ dị ka ndị na-ese ihe ụcha, ndị na-ese ihe, ndị na-ese ihe na-acha odo odo, ndị na-ahụ maka ime ụlọ, ndị na-ahụ maka ime ụlọ, ndị na-ese ihe, na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ nwere ike ịba uru na weebụsaịtị a.
Weebụsaịtị a ga-eme ka ihe atụ kọwaa n ’agba niile dị n’otu onyonyo, gụnyere usoro agba agba kachasị, atụ ụfụ, ụcha hex, agba RGB, na aha agba agba zuru oke.
Ọ bụrụ na ị mepụtara ibe weebụ ma ọ bụ blog ma ọ bụ dị ka onye ọkachamara ma ọ bụ blog amateur, m ji n’aka na ị ga-esiri gị ike ikewapụ na agba hexadecimal ma ọ bụ hex. N’ihi na hex agba a na-ejikarị eme ụdị dịgasị iche iche nke agba na weebụ.
Kedu ihe Hex Agba pụtara?
Agba Hex abụghị agba mana ọ bụ otu n’ime ụzọ isi dee koodu ụcha n’etiti ụdị nha ọzọ, dịka RGB, HTML, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. Yabụ na akpọrọ Hexa Agba koodu, ma ọ bụ ededokwara ya dị ka Hexa Koodu ma ọ bụ Hexa Coor ma ọ bụ Hex Agba.
Ederede na-eji ọnụọgụgụ 0 ruo 9 na mkpụrụedemede (site na A ruo F), ọnụọgụ koodu nwere mkpụrụedemede isii, nwere ike inwe naanị ọnụọgụ ma ọ bụ mkpụrụedemede, ma ọ bụ nchikota nke nọmba na mkpụrụedemede. Mgbe ahụ dị ka akara akara n’ihu ya na-eji ngere ahụ na mbido.
# 000000 (nọmba naanị)
#FFFFFFF (leta naanị)
# FF0000 (ọnụọgụ na leta jikọtara)
Na mgbakwunye, ọ bụrụ n ’ụwa nke eserese na eserese, ị ga-amatarịrị maka agba RGB agba, nke ezubere maka Ọdịdị Dijitalụ ma ọ bụ ngosipụta dijitalụ.
Kedu ihe RGB agba ???
RGB kwụchitere maka “Red-Green-Blue” bụ ihe eji agba ọkụ na agba (nke agba agba agba agba) na-eji maka ntinye dị ka igwe nyocha na ngwaọrụ mmepụta dịka ngosipụta, agba agba (Red, Blue, Green) dabere na teknụzụ nke Ngwaọrụ eji dịka CCD ma ọ bụ PMT na nyocha ma ọ bụ igwefoto dijitalụ, CRT ma ọ bụ LCD na ihuenyo nleba anya.
Mgbe (Red-Blue-Green) ejikọtara agba atọ ahụ ka ọ chawa ọcha, ọ bụ ya mere ihe kpatara eji akpọ RGB mgbakwunye agba ma ọ bụ agba agba asụsụ ọzọ. RGB agba bụ ụkpụrụ nke agba nke igwe elektrik na-eji dị ka telivishọn, ihe nlele kọmputa na nyocha. Ya mere, agba ndị RGB gosipụtara na-enwu enwu ma na-atọ ụtọ mgbe niile, n’ihi na a haziri ha n’ụzọ dị ka iji nyochaa ngosi, ọ bụghị ibipụta ka ha nwekwuo ike igwu egwu na agba. Mana nke ahụ apụtaghị na RGB enweghị nsogbu n’ihi na agba RGB ga-anọgidesie ike na ikike kọmputa ndị na-ebu ya mgbe niile. Yabụ ọ bụrụ na kọmputa anyị na-eji nwere ezigbo eserese eserese na onyonyo LCD, ngosipụta agba agba RGB ga-aka nke ọma karịa onye na-ahụ maka tube na kaadị eserese nkịtị.
N’ime ihe a, aga m akọwa ụzọ ị ga – esi jiri ihe na – ahọrọ ụcha n’onyinyo a:
1. Pịa Họrọ “Họrọ Foto gị” họrọ họrọ ihe osise ịchọrọ ịmata koodu agba ma bulite.
2. Pịnye aha foto a na kọlụm ide, mgbe ‘Tinye aha oyiyi’
3. Wee pịa “Nyefee”
Mgbe nke a mechara usoro agba agba, ihe atụ nke agba, ụcha hex, agba RGB, na aha agba agba zuru oke na tebụl.
Kedu?? Ọ dị mfe, nri ??
Biko gbaa mbọ bulite ọtụtụ foto ka ị nwere. Legodị nsonaazụ nke agwakọta ụcha na tebụl. Foto ị buliri ga-egosipụta agba niile, agba ụcha, ụcha RGB, yana aha agba.
This "Gbasara Anyị – Picker Agba Site Image" graphic has 20 dominated colors, which include . It makes so beautiful color combination inspired from this image.